Ngethuba lethu, iyeza likhula ngokukhawuleza kwaye, kubonakala ngathi, umbuzo wendlela yokwazi ngesondo lomntwana wakho ozayo akusekho mhlaba wonke. Kodwa a kunjalo! Uninzi lwabazali basalindele impendulo kuso. Umzekelo, umntu akafanelekanga kwindlela efana ne-ultrasound, ngenxa yezizathu zonyango, kwaye kwezinye iimeko umntwana unamahloni kangangokuba awuboniswa oogqirha kwi-angle efunekayo yokugqiba ngesondo.
Kwaye abazali bacinga-bebuza ukuba yintoni umbala wokuthenga zonke iintlobo zeembambulu kunye nezikhwama. Nangona kunjalo, enye enye indlela yokufumanisa ngesondo lomntwana, ngokusekelwe kumatshini womntu. Khumbula ukuba ezi zibonakaliso kwaye azikho ngaphezulu. Iphutha okanye inyaniso ilingana ngamathuba amahlanu ukuya kumahlanu! Akukho mbuzo wokuchaneka! Kodwa bonke abantwana bexesha elizayo abantwana, oku kukude neyona nto ephambili, akunjalo?
Utshintsho olubonakalayo ekubonakaleni kowesifazane okhulelweyo
Okokuqala, kunokwenzeka ukugcina utshintsho kwimeko yokubakho owesifazane okhulelweyo. Yiyo isizathu esona sininzi seempawu ezinxulumene nenkcazo yesondo yengomso eziza kubandakanywa nalokhu.
Kukho inkolelo yokuba ukuba isisu sibukhali, kwaye inkwenkwe ifihle kuyo. Ukuba ngokuchaseneyo, isisu sinokuthi sijikeleze kwaye sithengiswe, ke intombazana ihlala kuyo. Nangona oogqirha bathi amabango axhomekeka kuphela kwi-anatomy yowesifazane ngokwakhe, lo mqondiso kwinani elikhulu lamatyala linyani. Ukubonakala kwintlungu yeenwele kukho uphawu lokuzalwa kwenkwenkwe. Kwaye ukunyuka kwesikhumba se-skin is girls.
Izinwele kunye nezipikili
Abaninzi bathi xa umfazi ebhinqa inkwenkwana, iinwele zakhe kunye nezipikili zikhula ngokukhawuleza kunokuba ziqheleke. Ayinwele kuphela entloko, kodwa nayo yonke imizimba - imilenze, izandla, i-pubic. Ukuba iinwele zikhula kancinci kunexesha eliqhelekileyo, linda le ntombazana.
Isifuba somfazi okhulelweyo
Ngokomnye wabathandwa kakhulu kubantu baya kwamkela, ukuba isifuba asitshintshi isimo, yonke into, loo mfazi uza kuzala inkwenkwana. Yaye ukuba uthe wagcina utshintsho olukhawulezileyo kungekhona kuphela kwifom kodwa ubukhulu - ngokuqinisekileyo kuya kuba intombazana!
Izibonakaliso zincoma ukubeka ingqalelo kwiinambu. Ukuba i-aureol iya kukhanya ngakumbi kunexesha eliqhelekileyo-kuya kuba nenkwenkwe, kwaye ukuba le nto mbazana iya kukhanya.
Imilenze yomama ozayo
Imivuzo ayinakuhlala ingqalelo ngaphandle kweempawu zabantu. Ukuba iibhokhwe zikhula - lungise ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuba kungenjalo - Nantsi enye into ebangel 'ubulumko - ukuba imilenze ibomvu kunexesha eliqhelekileyo, linda unyana, ukuba akukho tshintsho, intombi.
Imali enkulu iya kudibana nenhlalakahle yowesifazane okhulelweyo. Oku akumangalisi, kuba ukukhulelwa akuchaphazeli nje kuphela uhlobo lomfazi, kodwa kunye nembono jikelele kunye nenhlalakahle.
I-Toxicosis ngumhlobo ohamba rhoqo. Ukuba i-nasusea idla ngokusa kusasa, ngokukhawuleza, kufuneka ulungiselele ukuzalwa kwentombazana. Ngaloo nto, intombazana izama ukungaxhatshazi umama, osufumene. Abafana, ngokuchaseneyo, basebenzise oomama usuku lonke. Amadoda ... Ndingathini?
I-chill kunye nomkhuhlane
Oomama abaninzi bokamva bayaxhalaba ukuba bahlala beshushu. Ixhatshazwa yi-chills, ngoko kukhangela ukushisa okukhulu. Ezi zihlandlo nazo zifanelwe ingqalelo kubantu. Ukuba i-chill - kuya kuba nentombazana, abafana bayaphoqeleka ukuba bafungele umama wabo.
Isimo sengqondo somfazi okhulelwe
Akukhokho ukunganyaniseki okukhulu kwihlabathi kune-samozhenshchina. Nangona lo wesifazane engazange azalwe. Ukuba owesifazane okhulelweyo akanakukwazi ukulawula iimvakalelo zakhe, uyakhala kwaye akhala, ngoko uyavuya kwaye ehleka, sinokuthi intombazana iya kuzalelwa.
Iidadekazi zexesha elizayo kufuneka zibonise ukuzithiba okukhulu kwaye zigcine umonde wazo. Ngubani othetha ngokulula? Oku akuyona nto ephambili ekunene ukuba neentliziyo ezimbini ezixabisekileyo - abafazi neentombi!
Kwizinto ezithandayo siza kuthetha ngokwahlukileyo. Isabelo esikhulu sempawu zabantu siwa ngokuchanekileyo kwizinto ezithandwa ngumfazi ngexesha lokukhulelwa. Akunakutsholwa ukuba impawu zichanekile ngokupheleleyo, kodwa banelungelo lokuba khona.
Ukuba intombazana iya kuzalwa, abafazi abakhulelweyo baya kukhalaza ngokunciphisa ukutya. Le ntombazana iqala ukucinga ngomfanekiso wayo ukusuka kwiintsuku zokuqala! Inkwenkwana, njengendoda yangempela, iya kumphoqa umama ukuba adle yena kunye naye!
Wonke umntu ujwayele ukucinga ukuba, xa oomama abanomdla ngokungaqhelekanga badla iifomese ezahlukeneyo, balinde ukuzalwa kwentombazana. Kodwa ubulumko bendoda ithi xa ama-mummies ethanda i-chocolate, ke kukho onke amathuba okuzala unyana.
Nguwuphi wamadoda enqaba inyama? Kwaye unyana ozayo naye akayi kubakho. Iimpawu zithi ukuba ngexesha lokukhulelwa umfazi ubonisa ukutsala kwenyama, loo nto iya kuzalwa. Kodwa khumbula ukuba akufanele udle zonke iintlobo zee-sausages kunye ne-sausages, yidla inyama yenyama nje!
Ukulala kuza kukuxelela okuninzi malunga
Misela ukuba isondo somntwana sinokwenzeka kwaye ngokubhekiselele kubukhulu bokuba utywala. Uninzi kakhulu oomama bathi le miqondiso iyinyaniso kubo.
Amagama ambalwa malunga nobude bokulala. Ngokuqhelekileyo, abaninzi abafazi bathanda ukulala kakhulu ngexesha lokukhulelwa. Ukuba uvakalelwa kukuba unobungozi, ungathetha ngokuzalwa komfana. Mhlawumbi, indoda inothando i-kdivanu ibonakala kwisisu somama.
Ukuba kukho umnqweno wokufumanisa ngesondo lomntwana ongakazalwa esisekelwe kumgaqo, ke uhlawule ngokukhethekileyo ukulala ebusuku. Ukuba ulele kwaye unamandla - kuza kuba nonyana, kwaye ukuba uhlala uvuka-intombi.
Kuyakwenzeka kwaye i-nepoluchitsya icacise ngesondo lomntwana ongakazalwa ngokutsho kweempawu ezichazwe. Kodwa uya kuvuya kakhulu ukuphawula kwaye ugcine utshintsho phakathi kwakho ngexesha lokukhulelwa. Okona kunomdla kumagumbi okubeleka kukufumana ukuba ngubani na uThixo akunike lona, ​​inkwenkwe okanye intombazana! Ekugqibeleni, ndifuna ukuthetha ukuba konke oku ngasentla kungokwinto encinci, ongayikholelwa kuyo, kodwa awukwazi ukukholelwa ... Mamela isicatshulwa sakho, mhlawumbi siya kukuxelela iimpawu ezilungileyo zokuba ngubani owenzela iilwanyana kwisisu sakho - inkwenkwana okanye intombazana ... Awufuni ukwazi ngale nto? Ngaba lo mntwana awuthandi ngokulinganayo, ngaba yinkwenkwe okanye intombazana?
I-horoscope yaminyaka yonke yomhlaza ka-2011
Yintoni okufanele ibe yintokazi efanelekileyo?
ULena Temnikova utshele inyaniso ngokusebenzisana noMax Fadeev